ညမင်းသား: Hepatitis A, B, C, D, E အသဲရောင်ရောဂါများ
1. အသား (မျက်လုံး၊ လက်သည်း၊ အရေပြား၊ ဆီး) ၀ါခြင်း၊
• (ဗိုင်းရပ်စ်) ပိုး (၅) မျိုးရှိသည်။ A, B, C, D, E တို့ဖြစ်ကြသည်။
• (ဗိုင်းရပ်စ်) ပိုးမှ ကူးသည့် အခြားရောဂါများမှာ အအေးမိခြင်း၊ ခွေးရူးပြန်ခြင်း၊ အချို့သော ကင်ဆာရောဂါများ၊ ဦးနှောက်အမြှေးပါး ရောင်ခြင်း၊ ရေယုံ၊ ၀က်သက်ရောဂါ၊ တုပ်ကွေး၊ ရေကြောက်၊
• ဒေလီတွင် ကူးစက်နေသည်။ အသေအပျောက်ရှိသည်။
1. အားနည်းခြင်း ခံစားရသည်၊
2. မစားချင်၊ မသောက်ချင် ဖြစ်လာသည်၊
3. ဖျား၊ ချမ်း၊
5. ပျို့၊ အန်၊
6. အသား (မျက်လုံး၊ လက်သည်း၊ အရေပြား၊ ဆီး) ၀ါလာသည်။ Jaundice ဟုခေါ်သည်။ ဖြစ်စေသော အခြားရောဂါ အများအပြားလဲ ရှိသည်။
7. အသဲရောင်သဖြင့် ရင်ဘတ်ညာဘက်အောက်ပိုင်းနေရာ သို့မဟုတ် ၀မ်းဗိုက်ညာဘက် အထက်ပိုင်းနေရာ၊ သို့မဟုတ် ရင်ခေါင်းနေရာက နာလာသည်။
• ပါးစပ်ထဲဝင်သည့် (ရေ၊ နို့၊ ဖျော်ရည်) တို့ကို ပွက်သွားအောင် ကြို၍သောက်ပါ။ ရေသန့်ဆေး (Chlorine tablet) ထည့်၍ သုံးပါ။ ပွက်သွားအောင် ကြိုမထားသောရေနှင့် ရေသန့်ဆေး ထည့်မထားသောရော၊ ရေသန့်ပုလင်းကရေ မဟုတ်ပါက မသောက်ပါနှင့်၊
• (အစားအစာ) တို့ကို ပွက်အောင်ပြုတ်၊ ကျော်၊ ပေါင်း၊ ချက်ထားသည့်အစာကို ပူနွေးနေစဉ် စားပါ။ ချက်ပြုတ်ပြီးပါက ယင်ကောင် မနားစေရန် ဖုံးအုပ်ထားပါ။ ယင်ကောင်၏ ခြေထောက်၌ ပိုးကပ်ပါလာနိုင်သည်။ အပြင်းစာ၊ အပြင်ဆိုင်က ရောင်းသည့် အစာများကို သန့်-မသန့် စစ်ဆေးပြီးမှ စားပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် မစားပါနှင့်။ ရောဂါရှိသူ ချက်ပြုတ်ကျော်လှော်ဆေးကြောသည်မှ ကူးစက်နိုင်သည်။
• Hepatitis A အသဲရောင်အသားဝါရောဂါ အေ ကာကွယ်ဆေးသည် 95% ထိရောက်သည်။
• ရေလောင်းအိမ်သာကိုသာ သုံးပါ။ မရှိပါက ယင်လုံအိမ်သာ သုံးပါ။
• ဆီးဝမ်းသွားပြီးတိုင်း ဆပ်ပြာနှင့် လက်ဆေးပါ။
• အသီးအနှံများကို မစားမီ ရေသန့်သန့်ဖြင့် ဆေးပါ။ ဆားရေဖြင့်ဆေးက ပိုကောင်းသည်။
• အရက်၊ မူးယစ်ဆေး၊ ဆေးလိပ်၊ ပြင်းသည့် ဆေးဝါးများ ရှောင်ပါ။
Hepatitis B virus (HBV) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်သည့် ကူးစက်ရောဂါအပြင်းစားဖြစ်သည်။ အသဲကင်ဆာ၊ အသဲခြောက်ရောဂါနှင့်၊ အသဲအလုပ် မလုပ်တော့ခြင်းတို့ကို ဆက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ HIV ကဲ့သို့ သွေး-ဆေးထိုးအပ်မှတဆင့်၎င်း၊ ကိုယ်ကထွက်သော အရည်များက၄င်း၊ မိခင်က ကလေးသို့၎င်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှ၎င်း ကူးစက်နိုင်သည်။ သို့သော် HIV ထက် အဆ (၁၀၀) ပို၍ ကူးစေသည်။ အချို့မှာ လက္ခဏာများ ဆိုးစေကာမူ ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ကလေးများဖြစ်လျှင် ပိုဆိုးနိုင်သည်။ (၆) လ အောက် ရက်တိုနှင့် (၆) လအထက် နာတာရှည် (၂) မျိုးဖြစ်နိုင်သည်။
လက္ခဏာ မပေါ်ဘဲ ပိုးရှိနေတတ်သည်။ ပိုးဝင်ပြီး တလခွဲအကြာ လက္ခဏာများ ပေါ်မည်။ အစားပျက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ အားယုတ်ခြင်း၊ ဗိုက် အသဲနေရာနာခြင်း၊ ဆီးအရောင် ရင့်ခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်း။
Hepatitis B surface antigen (HBsAg), Antibody to hepatitis B surface antigen (anti-HBs), Antibody to hepatitis B core antigen (anti-HBc) တို့ကို စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုးရှိ-မရှိ သိနိုင်သည်။
ပိုးနှင့်တွေ့သည်ဟု သံသယရှိပါက Hepatitis B immune globulin within 24 hours နှင့် Hepatitis B vaccine x3doses ဆေးထိုးရမည်။ Interferon, Lamivudine (Epivir-HBV), Adefovir dipivoxil (Hepsera), Entecavir (Baraclude) ဆေးများပေးနိုင်သည်။
Liver transplantation အသဲအစားထိုးခြင်း လုပ်နိုင်သည်။
(စီ) ပိုးသည် လက္ခဏာမပေါ်ဘဲ ပိုးရှိနေတတ်သည်။ Hepatitis C virus (HCV) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်သည့် ကူးစက်ရောဂါ အပြင်းစား ဖြစ်သည်။ ဥပမာ အသဲကင်ဆာ၊ အသဲခြောက်ရောဂါနှင့် အသဲအလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း တို့ကို ဆက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ လိင်မှတဆင့် မကူးစက်။ ဆေးထိုးအပ်ကတဆင့် ကူးစက်သည်။ မိခင်မှ ကလေး ကူးသည်။ ကာကွယ်ဆေး မရှိသေး။ အစားပျက်ခြင်း၊ ပျို့-အန်ခြင်း၊ အနည်းငယ် အားယုတ်ခြင်း၊ ဗိုက် အသဲနေရာ နာခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်း၊ တုပ်ကွေးလိုဖြစ်ခြင်း၊ သွေးစစ်၍ သိနိုင်သည်။ အချို့က ပျောက်သွားနိုင်သည်။ အချို့က နာတာရှည်ဖြစ်မည်။
Weekly injections ofadrug called pegylated Interferon alfa combined with Ribavirin (Rebetol) BD ဆေးများ ပေးနိုင်သည်။ အသဲ အစားထိုးခြင်း လုပ်နိုင်သည်။
(HDV) သည် လိင်-သွေးမှတဆင့် ကူးသည်။ (ဘီ) ပိုးရှိနေမှ (ဒီ) ပိုးကူးသည်။ အစားပျက်ခြင်း၊ ပျို့-အန်ခြင်း၊ အားယုတ်ခြင်း၊ ဗိုက် အသဲနေရာ နာခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်း၊ (ဘီ) ပိုး ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့်သည်။ Interferon-alfa ဆေးပေးခြင်း၊ အသဲအစားထိုးခြင်း လုပ်ပေးနိုင်သည်။
(ဗိုင်းရပ်စ်) ပိုး (E) သည် ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ နာတာရှည်ဖြစ်စေသည်။ ကင်ဆာ ဖြစ်သွားစေသည်။ ကူးစက်ပုံမတူ၊ HIV-AIDS ကဲ့သို့ ဆေးထိုးအပ်မှ၎င်း၊ ကျား-မ အတူနေ၍၄င်း ကူးသည်။ မိခင်မှ ကလေးအား ကူးသည်။ (ဘီ) ပိုးရှိနေမှ (ဒီ) ပိုးကူးသည်။ အစားပျက်ခြင်း၊ ပျို့-အန်ခြင်း၊ အားယုတ်ခြင်း၊ ဗိုက် အသဲနေရာ နာခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်း တို့ဖြစ်မည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ၌ အဖြစ်များသည်။ နာတာရှည်မဖြစ်၊ (အေ) ကဲ့သလို့ အစား-ရေကတဆင့် ကူးစက်သည်။
• (အေ) နှင့် (အီး) တို့သည် (စအို) မှ ထွက်၍ (ပါးစပ်) သို့ ၀င်သည့်လမ်းကြောင်းက ကူးစက်သည်။
• (ဘီ) သည် အတူနေခြင်း၊ လိင်လမ်းကြောင်း၊ ဆေးထိုးအပ်၊ ကလေးအား မိခင်တို့မှတဆင့် ကူးသည်။
• (စီ) သည် ဆေးထိုးအပ်မှ ကူးသည်။
• (ဒီ) သည် ထိတွေ့ခြင်းနှင့် ဆေးထိုးအပ်တို့မှ ကူးသည်။ (ဘီ) ရှိနေလျှင် ဖြစ်တတ်သည်။
• (စအို) မှထွက်၍ (ပါးစပ်) သို့ဝင်သည့် လမ်းကြောင်းက ကူးစက်သည့် အခြားရောဂါများမှာ ၀မ်းပျက်ခြင်း၊
၀မ်းကိုက်ခြင်း၊ ကာလ၀မ်း ရောဂါ၊ အူရောင်ငမ်းဖျားခေါ် တိုက်ဖွိုက် (Typhoid) ရောဂါ၊
• လိင်ဆက်ဆံရာ၌ (ကွန်ဒွန်း) အကာကွယ်ယူရမည်။
• ဆေးထိုးအပ်၊ (ရေဇာ)၊ သွားတိုက်တံ၊ လက်သည်းညှပ် စသည်တို့ကို တဦးတည်းအတွက်သာ သုံးရမည်။
• သွေးသွင်း၊ သွေးလှူလျှင် စစ်ဆေးးရမည်။
ကာကွယ်ဆေးများ၊ (အေ) (၂) ခါ၊ (ဘီ) (၃) ခါ ထိုးပါ။
အိန္ဒိယတွင် အသဲရောင်အသားဝါ (B) ပိုးအတွက်သာ ရှိသည်။ (၆) လခြား (၃) ခါ ထိုးရသည်။
အသဲရောင် အေ နှင့် ဘီ ကာကွယ်ဆေးများအကြောင်း သည်းသန့်ဖေါ်ပြထားသည်။
• (ဘီ) ပိုးနှင့် ထိတွေ့ရပါက Hepatitis B immune globulin injection ကို ၁၄ ရက်အတွင်း ထိုးပါ။ Hepatitis B ကာကွယ်ဆေး (၃) ခါထိုးပါ။
• (စီ) ဖြစ်လျှင် (အေ) (၂) ခါ၊ (ဘီ) (၃) ခါ ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးပါ။
• (စီ) အတွက် Pegylated Interferon and Ribavirin ဆေးပေးရသည်။
398 Views | Post Comments | Share with Friends | Recommend
Hepatitis C virus (HCV) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်သည့် ကူးစက်ရောဂါ အပြင်းစား ဖြစ်သည်။င်သည်။ လိင်မှတဆင့် မကူးစက်။ ဆေးထိုးအပ်ကတဆင့် ကူးစက်သည်တဲ့ ဒါပေမဲ့..http://publichealthinmyanmar.blogspot.com/2008/10/premarital-screening.html မှာ...အသဲရောင်အသားဝါ ဘီပိုး နဲ့ စီပိုး (Hepatitis B & C)
ပိုးတွေကလည်း HIV ပိုးလိုပဲ လိင် ကနေ တဆင့် ကူးစက် နိုင်တာကြောင့် ကြိုတင် စစ်ဆေး သင့်ပါတယ်တဲ့...ဘယ်ဟာအမှန်လဲ?
Hepatitis C virus (HCV) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုသည်။ လိင်မှတဆင့် မကူးစက်။ ဆေးထိုးအပ်ကတဆင့် ကူးစက်သည်ဆိုတာ...စာဖတ်သူတွေကို...နားလည်မှုလွဲစေနိုင်ပါသည်